မင်္ဂလာ Forex EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 12, 2019
ပင်မစာမျက်နှာမင်္ဂလာ Forex EA ၏မင်္ဂလာ Forex EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် မင်္ဂလာ Forex EA ၏ 0
"အကောင်းဆုံး Forex EA ၏'S ၏" ထိပ်တန်း 30 အဆင့် "| ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် "ကျဘျဆိုကျ
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ဒီဇင်ဘာလတွင် 2019
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ဒီဇင်ဘာလ 2019 - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ - FX စက်ရုပ်
FX ခုနစ် pips EA
စျေးနှုန်း: $ 129 (2 အစစ်အမှန် &2DEMO အကောင့်များအခမဲ့ updates & အတွက်အထောက်အပံ့)
မှတ်ချက် - ယခုလက်ရှိတွင် FX Seven Pips ကျွမ်းကျင်သူ၏3ကွဲပြားခြားနားသော package များရှိသည်။
- အခြေခံ - 1 REAL & …
စျေးနှုန်း: $ 249 (2 အစစ်အမှန်သို့မဟုတ် Demo စာရင်းများပါ ၀ င်သော2လိုင်စင်ပါ Package, အခမဲ့မွမ်းမံမှုများနှင့်ပံ့ပိုးမှု)
ငွေကြေးအတွဲများ - AUDUSD, EURUSD, GBPUSD နှင့် USDCHF
မှတ်ချက် - Eros Profit Expert Advisor avai ၏3ကွဲပြားခြားနားသော package များရှိသည်။
Z ကို Trader FX ကို EA
စျေးနှုန်း: $ 117 (2 အစစ်အမှန် &2DEMO အကောင့်များအခမဲ့ updates & အတွက်အထောက်အပံ့)
မှတ်ချက်: ရရှိနိုင်ပါကဤ Z ကို Trader FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး၏2ကွဲပြားခြားနားသော packages များအခုအချိန်မှာရှိပါတယ်:
- BASIC:2ရီးရဲလ် & နံနက် ...
TSFX EA ၏
စျေးနှုန်း: $ 249.99 (BASIC ဗားရှင်း, 1 လိုင်စင်များအတွက်စျေး, အခမဲ့ updates & အတွက်အထောက်အပံ့)
မှတ်ချက်: ရရှိနိုင် TSFX testosterone ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး၏2ကွဲပြားခြားနားသော packages များအခုအချိန်မှာရှိပါတယ်:
- BASIC ဗားရှင်း: ...
Forex စိန် v4.0 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Forex စိန် v4.0
စျေးနှုန်း: $ 177 (1 လိုင်စင်စျေးလျှော့စျေး, အခမဲ့ updates & အတွက်အထောက်အပံ့)
မှတ်စု - ခရစ်စမတ်ရောင်းဝယ်မှု - 40% OFF - ပုံမှန်စျေးနှုန်း - $ 297
Forex Diamond v4.0 ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - …
FXEURGrid EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
FXEURGrid EA ၏
စျေးနှုန်း: $ 220 (1 တစ်သက်တာလိုင်စင်, အခမဲ့ updates & 24 /7friendly အတွက်အထောက်အပံ့)
FXEURGrid EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အမြတ်ငွေလုံလုံခြုံခြုံပြီးတော့တည်ငြိမ် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
EA ၏အစွမ်းထက်နှင့်အပြည့်အဝ au ဖြစ်ပါတယ် FXEURGrid ...
မှတ်စု - ခရစ်စမတ်ရောင်းအား - 40% OFF - ပုံမှန် ...
စျေးနှုန်း: $ 1,990 (Unlimited အကောင့်များအခမဲ့ updates & အထောက်အပံ့စျေး)
လွယ်ကူသော Walker က FX EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
လွယ်ကူသော Walker က FX ကို EA
စျေးနှုန်း: $ 349 (1 လိုင်စင်, အခမဲ့ updates & Support)
ငွေကြေးအားလုံး: EURUSD, GBPUSD နှင့် EURGBP
မှတ်ချက်: ဤ Forex EA ၏များ၏ကုန်သွယ်ရလဒ်များကိုရှေးခယျြသော FX ပွဲစားအပေါ်အလွန်မှီခိုဖြစ်ကြပြီးမကြာခဏနိုင်ပါတယ်အခြေခံကျကျ di ...
Forex Warrior ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Forex Warrior EA ၏
စျေးနှုန်း: $ 179 (1 လိုင်စင်စျေးလျှော့စျေး, အခမဲ့ updates & အတွက်အထောက်အပံ့)
ငွေကြေးစွမ်း: GBPUSD, EURUSD သို့မဟုတ် EURGBP နှင့် AUDUSD သို့မဟုတ် NZDUSD
မှတ်ချက်: တင်းကြပ်စွာ LIMITED အထူးလျှော့စျေး - 25% OFF - မှန်မှန်, PRICE: $ 239
Forex W က ...
ရရှိနိုင်ပါသည်မင်္ဂလာ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး၏2ကွဲပြားခြားနားသော packages များအခုအချိန်မှာရှိပါတယ်:
မင်္ဂလာ Forex EA ၏ Review – Profitable Expert Advisor With Low Drawdown
မင်္ဂလာ Forex EA ၏ တစ်ဦးသည်တန်ခိုးနှင့်ပြည့် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး မင်္ဂလာ Forex Group မှ.
အဆိုပါကုန်သွယ်မှုစနစ်တည်ငြိမ်အမြတ်အစွန်းနှင့်အနိမ့် drawdown ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏အားသာချက်တစ်ခုမှာကအများကြီးတိုးလာမရှိဘဲ (ဇယားကွက်မဟာဗျူဟာ) (အဘယ်သူမျှမ martingale) reinsurance ရာထူးတစ်ခုကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျကဈေးကွက်သို့ဘေးကင်းလုံခြုံ entry ကိုများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ညွှန်ပြချက်) ကိုအသုံးပြုပါတယ်။
ဤသည်ကို EA နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင် EURUSD, EURCHF, GBPUSD နှင့် AUDUSD 1 နာရီအချိန်ဘောင်အပေါ်ငွေကြေးအားလုံး။ အဆိုပါ Forex စက်ရုပ် max ဖြင့်မည်သည့်ပွဲစားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။4pips ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ သငျသညျမိနစ်အတွင်းအလွယ်တကူ setup ကိုအရာအားလုံးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါမင်္ဂလာ Forex ထောက်ခံမှုအဖွဲ့အမြဲသင့်ကိုကူညီပေးဖို့အဆင်သင့်ပါ!
မင်္ဂလာ Forex EA ၏ သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူအပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်!
၏အသုံးပြုမှုကို Make မင်္ဂလာ Forex EA ၏ နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
ခင်မှာ FX ထရေးဒင်းစက်ရုပ်အကြောင်းကြားပြီမဟုတ်လော
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံဘာသည် မင်္ဂလာ Forex EA ၏ အားလုံးအကြောင်းပါ။ ဒါဟာသင်ပြန်ထိုင်အနားယူနှင့်ရိုးရှင်းစွာ FX ထရေးဒင်းစက်ရုပ်က၎င်း၏လှည့်ကွက်ပြုပါစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ automated Forex မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။ ဘောင်, အကြေးခွံနှင့်သင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာကန့်သတ်သငျသညျပေးခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုပ်ကျော်ကြာနှင့်သင်တို့အဘို့အရောင်းအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာအခြားအရေးကြီးကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးအပေါ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ် 24 /5အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်ခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ။ သင်ကကို turn off မဟုတ်လျှင်ဒီတော့သင်ကတစ်ခုတည်းအကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်မှု option ကိုလက်လွတ်မည်မဟုတ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုမတူဘဲလူ, အကို EA စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများကငျးမဲ့သည်နှင့်သာလုံးဝ Calculator ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးစွယ်-of-the-ယခုအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချကြလိမ့်မည် တကယ်တော့ကအချက်အလက်များနဲ့ကိန်းဂဏန်းများ compile ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိတော့မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလမျး၌အရမသွားပါစေလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာ Forex EA ၏ - ထရေးဒင်း Logic, Setup ကိုထိုအခြားလိုအပ်ချက်များအကြောင်း
မင်္ဂလာ Forex EA ၏ အချို့သောနာရီအတွင်းအရောင်းအ, လာမယ့်စုံတွဲနာရီသို့မဟုတ်နေ့ရက်ကာလအဘို့စျေးနှုန်းညှနျကွားခပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အန္တရာယ်များနှင့်နှစ်လိုဖွယ်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ အဆိုပါကုန်သွယ်မှုစနစ်ကြီးမြတ်အမြတ်အစွန်းရရှိမညျနှင့်နေ့တိုင်းအရောင်းအဖွင့်လှစ်။
ဤ FX စက်ရုပ် အပေါ်အရောင်းအ EURUSD, EURCHF, GBPUSD နှင့် AUDUSD အားလုံး။ terminal ကိုအတွက်အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေလိုအပ်ချက် $ 1000 ဖြစ်သင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် $ 1000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မဟုတျပါလျှင်, သင်အဖြစ်အနည်းငယ်သာအဖြစ် $ 10 ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူရာခိုင်နှုန်းအကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဆိုလိုသည်။
မင်္ဂလာ Forex ကုန်သွယ်မှုစနစ်ကအဓိက Forex စျေးကွက်အပေါ် (အဖြစ်ကောင်းစွာသစ်ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ကဲ့သို့) အားလုံးကုန်သည်များများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာ Forex Metatrader လျှောက်လွှာနှင့်အတူမည်သည့်အကြီးစား client ကိုအကောင့်အသစ်များ၏အပေါ်ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်။
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာ Forex v1.6
မင်္ဂလာ Forex v1.6 အသစ်က setting ကိုကဆက်ပြောသည်: ProfitCheck, EquityGainPercent, SafeEquityRisk နှင့်အသစ်ကုန်သွယ်မှု3setting ။
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာ Forex v1.7
ဗားရှင်း v1.7 ပြီးသားဂန္ဇယားကွက်မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျဂန္ဇယားကွက်မှာအောက်ပါအတိုင်းအမိန့်ကိုသုံးပါလျှင်, သငျသညျမွငျ့မား drawdow ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, ကျနော်တို့ကညွှန်ပြချက်သတ်မှတ်ပါတယ်ကြောင်း variable ကိုအောက်ပါအတိုင်းအမိန့်မှစီမံခန့်ခွဲကိုပြု၏။ အသစ်က setting ကို Added: OpenOrdersLimitDay, နယူးပြောင်းလဲမှုအရသိရသည် 1,2 နှင့်3setting backtest 99.90%
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာ Forex v1.8
နယူး update ကိုမင်္ဂလာ Forex v1.8 အသစ်က setting ကိုကဆက်ပြောသည်: သတင်းစစ်ကဆက်ပြောသည်သတင်းငွေကြေး filter ကို fix ။ ကျနော်တို့ Excel ကိုထံမှအစီရင်ခံစာကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီဇိုင်းသတင်းများ Filter ကိုဖြစ်ကြသည် (ForexTSD_2013-08-27.csv (3792) လာသောအခါစာမျက်နှာတခါတရံညွှန်းကိန်းကိုတုံ့ပြန်မဟုတ် FFCal ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ https://www.forexfactory.com/calendar.php not work. Now indicator FFCal is not required. News currency filter – where you can choose the Currency which News should be filtered (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD, CNY)
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာ Forex v1.9
တင်းကျပ်သောစုစည်း mode ကို (#property တင်းကြပ်) နဲ့သတ်မှတ်ထားသောသစ်တစ်ခု MQL4 အတွက် source code ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ
DLL ကိုမသုံးဘဲစနစ်သစ်မျိုးဆက်နံပါတ်စဉ်။ EA ၏နောက်ကျော / ရှေ့စမ်းသပ်မှုအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
အသစ်သောအပြင်အဆင်များကဆက်ပြောသည်: Profit_all_orders (အမိန့်ကော်မရှင်နှင့်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်တွေကို), Newsfilter နှင့် Indikaror Fix, OpenOrdersLimitDay, ရှိသမျှ setting များကိုယခု NewsFileNum 1 ဖြစ်ပါသည်
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာ Forex v2.0
အသစ်သောအပြင်အဆင်များကဆက်ပြောသည်: ဇယားအပေါ်ပြပွဲလိုင်းများနှင့်အတူသတင်း Filter ကို setup ကို
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာ Forex v2.1
Fixed: FFCal Error - ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကို download လုပ်လို့မရဘူး။
ထို့အပြင် fixed: အမြတ်အစွန်းအားလုံးအမိန့် setting ထဲမှာအားလုံးပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကိုပိတ်ဖို့
ပုံသေ: အင်ဖို Panel ကိုအပေါ်ပြသသတင်း
fixed: အင်ဖို Panel ကိုပေါ်မှာရှိသမျှအမိန့်များတိုးပွားလာသောအခြေအနေ
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာ Forex v2.2
နယူးရောင်းန့်သတ်ချက်အမိန့်ထားတစ်ခုတည်းသောနေရာချလက်ရှိရောင်းရာထူးနှင့်အသစ်ဝယ်ကန့်သတ်အမိန့်အထက်, တစ်ခုတည်းသောလက်ရှိဝယ်ရာထူးအောက်မှာ: အားလုံးကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာအဘို့ပြောင်းလဲမှု။
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာ Forex v2.3
အစာရှောင်ခြင်း backtest များအတွက် source code ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာ Forex v2.3.1
4 တည်ဆောက် MT1170 များအတွက် source code ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ
မင်္ဂလာ Forex EA ၏ - သင်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောကုန်သွယ်ရေးကိရိယာ
ယင်းကို EA နှင့်အတူပျက်ကွက်အလွန်ဖှယျအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ် ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုအာမခံချက်တစ်ဦး၏ဖန်တီးသူဖြစ်သောကြောင့် 70% အောင်မြင်မှုနှုန်းထက်ကိုပိုပြီး နှင့်လည်းအတည်ပြုထားသောရလာဒ်များပေးလိမ့်မည်။
မင်္ဂလာ Forex EA ၏ မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ€ 209.30 မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
အဆိုပါတရားဝင်မင်္ဂလာ Forex EA ၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
မင်္ဂလာသတင်းကို EA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA ၏'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် - BESTFOREXEAS.COM သည် RATING
Happy Forex EA - နည်းသောကြိုတင်မဲပေးမှုနှင့်အတူအကျိုးအမြတ်ရသည့်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
အကောင်းဆုံး Forex EA ၏ 2015
အကောင်းဆုံး Forex စက်ရုပ် 2015
EA ၏မင်္ဂလာ Forex
EA ၏မင်္ဂလာ Forex ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
မင်္ဂလာ Forex ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
မင်္ဂလာ Forex စက်ရုပ်
မင်္ဂလာ Forex စက်ရုပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
CabEX EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2016